उपसभामुखलाई राजिनामा गराइदै: को होला सभामुख सुभास वा अग्नी ? – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/उपसभामुखलाई राजिनामा गराइदै: को होला सभामुख सुभास वा अग्नी ?
काठमाडौं,२५ मंसिर । आफुलाई सभामुखको दावेदार मान्दै आएकी उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई राजिनामा गराइने भएको छ । यस अघि नै राजिनामा दिन आग्रह गरिएको भएपनि उनले संकट उत्पन्न हुने भन्दै राजिनामा दिन अस्वीकार गर्दै आएकी थिइन् ।
एलिना चौहानसंग गीत रेकर्ड गराऊदै भाइरल अमित कुमार राई, यसरी पुरा हुँदैछ उनको सपना – हेर्नुहोस् भिडियो
प्रथम प्रकाश दाहाल स्मृति’ खुला राष्ट्रिय तेक्वान्दो प्रतियोगिता सुरु